ကိုဗစ်လူနာတွေ သတိကြီးကြီးထားရမယ့် အသံတိတ်ဇီဝိန်ခြွေ ကိုဗစ်လက္ခဏာတခု – 7Day Update News
ပြောရရင် အောက်ဆီဂျင်အရမ်းကျနေတာ (hypoxia) ကို monitor မှာ ပြနေတယ် ။ သို့ပေသိ လူနာမှာ အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုမှမပြဘူး (ဥပမာ – မောတာ) ။ ဆိုတော့ကာ လူနာက ဘာလက္ခဏာမှမခံစားရဘူး (ဒါဟာ ကိုဗစ်ကြောင့်ပါ) ။ မခံစားရတော့ နေသာသလိုနေတယ် ။ ပြောစကား နားမထောင်ဘူး ။
ဦးလေးရေ / အဒေါ်ရေ . . . ဒီမှာတော့ အောက်ဆီဂျင်ကျနေပါတယ် ။ ကျေးဇူးပြုပြီး မှောက်ရက်နေပေးပါ ။ နည်းနည်းလေးမှ မလှုပ်ပါနဲ့ ။ အိမ်မြန်မြန်ပြန်ချင်ရင် အောက်ဆီဂျင်ကို အားစိုက်ရှုပေးပါ ။ တစ်ခုခုလုပ်ချင်ရင် အထဲမှာရှိတဲ့ ဆရာတွေ ၊ ဆရာမတွေ ၊ ဗိုလံတီယာတွေကိုပြောပါ ။ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ် ။ ကျေးဇူးပြုပြီး အောက်ဆီဂျင်ကိုသာ အားစိုက်ပြီးရှုပေးပါ ။
အာပေါက်မတတ်ပြောတယ် ။ လိပ်ခေါင်းထွက်မတတ်ပြောတယ် ။ သို့ပေသိ honeymoon hypoxia – happy hypoxia လို့ခေါ်တဲ့ အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လပ်တဲ့ လက္ခဏာကို လူနာကမခံစားရတော့ ဟောရင်းသာ ပျံလွန်တော်မူသွားမယ် . . . လူနာတွေက စကားနားမထောင် ။ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် အောက်ဆီဂျင်အကူအညီမပါပဲ အိမ်သာထသွားတော့ လူနာက အိမ်သာသွားတဲ့လမ်းမှာတင် ကိစ္စပြတ်သွားတယ် ။စိတ်ဓာတ်တွေက ကျပြီးရင်းကျပဲ ။
အပြင်ပန်းကကြည့်ရင်တော့ လူကပင်ပန်းတဲ့ပုံမပေါ်ပေမယ့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့ တော်တော်များများက ထိခိုက်နေကြပါပြီ ။ ခုဆိုရင် လက်သန်းမှာ မှင်စွန်းရာလေးတွေနဲ့ ပေါ့စတစ် လူနာတွေလည်း တွေ့လာနေရပါပြီ ။ ဗိုလံတီယာတွေ ၊ ဆရာ / ဆရာမတွေ တော်တော်များများလည်း သိပ်ပြီးတောင့်ခံနိုင်တော့မယ် မထင်ပါဘူး ။ မြန်မြန်ပြီးစေချင်ပါပြီ ။
ကိုဗဈလူနာတှေ သတိကွီးကွီးထားရမယျ့ အသံတိတျဇီဝိနျခွှေ ကိုဗဈလက်ခဏာတခု
ပွောရရငျ အောကျဆီဂငျြအရမျးကနြတော (hypoxia) ကို monitor မှာ ပွနတေယျ ။ သို့ပသေိ လူနာမှာ အောကျဆီဂငျြပွတျလတျတဲ့လက်ခဏာတဈခုမှမပွဘူး (ဥပမာ – မောတာ) ။ ဆိုတော့ကာ လူနာက ဘာလက်ခဏာမှမခံစားရဘူး (ဒါဟာ ကိုဗဈကွောငျ့ပါ) ။ မခံစားရတော့ နသောသလိုနတေယျ ။ ပွောစကား နားမထောငျဘူး ။
အာပေါကျမတတျပွောတယျ ။ လိပျခေါငျးထှကျမတတျပွောတယျ ။ သို့ပသေိ honeymoon hypoxia – happy hypoxia လို့ချေါတဲ့ အောကျဆီဂငျြပွတျလပျတဲ့ လက်ခဏာကို လူနာကမခံစားရတော့ ဟောရငျးသာ ပြံလှနျတျောမူသှားမယျ . . . လူနာတှကေ စကားနားမထောငျ ။ ကိုယျ့သဘောနဲ့ကိုယျ အောကျဆီဂငျြအကူအညီမပါပဲ အိမျသာထသှားတော့ လူနာက အိမျသာသှားတဲ့လမျးမှာတငျ ကိစ်စပွတျသှားတယျ ။စိတျဓာတျတှကေ ကပြွီးရငျးကပြဲ ။
အပွငျပနျးကကွညျ့ရငျတော့ လူကပငျပနျးတဲ့ပုံမပျေါပမေယျ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာမှာတော့ တျောတျောမြားမြားက ထိခိုကျနကွေပါပွီ ။ ခုဆိုရငျ လကျသနျးမှာ မှငျစှနျးရာလေးတှနေဲ့ ပေါ့စတဈ လူနာတှလေညျး တှလေ့ာနရေပါပွီ ။ ဗိုလံတီယာတှေ ၊ ဆရာ / ဆရာမတှေ တျောတျောမြားမြားလညျး သိပျပွီးတောငျ့ခံနိုငျတော့မယျ မထငျပါဘူး ။ မွနျမွနျပွီးစခေငျြပါပွီ ။
အမရေိကနျတှငျ တဈရကျအတှငျး COVID-19 လူနာသဈ တဈသိနျးရှဈသောငျးခနျ့ စံခြိနျတငျ စဈဆေးတှရှေိ့